बुधबार तपाइको भाग्य कस्तो छ ? « लुम्बिनी सञ्चार
प्रकाशित मिति : 25 May, 2022 5:25 am
वि.सं. ः २०७९ जेठ ११ गते बुधबार
इ.सं. ः २५ मे २०२२
सूर्योदयः विहान ०५ः१२ बजे
सूर्यास्तः बेलुका १८ः५० बजे
तिथिः दशमी १३ः५४ सम्म, तत्पश्चात् एकादशी
पक्षः जेष्ठ कृष्णपक्ष
नक्षत्रः उत्तरभाद्रपदा २६ः२१ सम्म, तत्पश्चात् रेवती
योगः प्रीति २२ः५८ सम्म, तत्पश्चात् आयुष्मान
करणः विष्टि १०ः४९ सम्म, तत्पश्चात् बव
मनमा अशान्ती रहने छ । शरिरमा पिडा हुनसक्छ । अनावश्यक कार्यको लागि धेरै खर्च हुन सक्दछ । व्यापारमा हानी हुनसक्हुने भएकोले व्यापार गर्दा सोच विचार पुर्याउनु होला । आप्mन्तसँग कारोबार गर्दा विचार पुर्याउनु होला ।
वृष राशी हुनेहरुको लागि आजको दिन शुभ रहेको छ । आय आर्जन राम्रो हुनेछ । नयाँ कार्यको थालनी होला । आर्थिक कारोबारको लागि शुभ रहेको छ । आप्mन्तबाट सहयोग मिल्नेछ । विभिन्न उपहार पनि पाइने छ ।
मिथुन राशी हुनेहरुको आजको दिन सुखद् रहेको छ । मनमा प्रसन्नता आउनेछ । नोकरीमा सम्मान पाइनेछ । पिताबाट सहयोग मिल्नेछ । तपाईको लक्ष्यमा अवश्य पनि पुग्नु हुने छ । नयाँ कार्यको थालनी गरे सफलता मिल्ने छ ।
कर्कट राशीहुनेहरुको आज शुभ छैन । पेटमा समस्या उत्पन्न हुन सक्दछ । राजनीतिमा प्रतिस्पर्धीहरुले अनावश्यक आरोप लगाउने छन् । मनमा अशान्ती रहनेछ । यात्रा गर्दा विचार पुर्याउनु होला । आत्मसम्मानमा आँच आउँन सक्दछ ।
सिंह राशीको व्यक्तिको आजको दिन राम्रो छैन । अनावश्यक विवाद र भैmगडामा पर्नु हुने छ । विभिन्न संकट आइपर्नेछन् । आँटेको काम बन्दैन । घर व्यवहारमा पनि विभिन्न समस्याहरु आइपर्नेछन् । आफन्तहरुसँग विवाद हुन सक्दछ ।
कन्या राशी हुनेहरुको आजको दिन राम्रो रहेको छ । शत्रु माथि विजय प्राप्त हुने छ । दाम्पत्य जीवन सुखद् रहनेछ । साझेदारीमा काम गरे सफल हुनेछ । व्यवसायमा प्रगती हुने छ । पढाई लेखाईमा मन लाग्नेछ ।
तुला राशी भएका व्यक्तिहरुको आजको दिन राम्रो रहने छ । नयाँ कामको थालनी हुनेछ । व्यापारबाट पनि मनग्गे आम्दानी हुनेछ । नोकरी र व्यापारबाट धन लाभ हुनेछ । अध्ययनमा सफलता हात लाग्नेछ ।
वृश्चिक राशी हुनेहरुको लागि आजको अशुभ रहेको छ । अध्ययनमा मन नलाग्दा अध्ययनबाट सफलता हात लाग्दैन । स्वास्थ्यमा समस्या आइपर्नेछ । भाग्यले साथ नदिँदा बन्न लागेका कार्यहरु रोकिने छन् । शरीरमा आलस्यता बढ्नेछ ।
धनु राशीहुनेहरुको लागि आजको दिन सुखद् छैन । स्वास्थ्यमा समस्या आउने छ । आप्mन्तसँग विवाद हुन सक्नेछ । स्वास प्रस्वासमा समस्या आउन सक्दछ । साथिहरुबाट धोका पाउन सक्नु हुनेछ । आजको दिन जुनसुकै कार्य गर्दा सर्तक रहनु होला ।
मकर राशी हुनेहरुको लागि आजको दिन शुभ रहेको छ । परिवारबाट सुख मिल्लने छ । परिश्रमको फल मिल्नेछ । दाजुभाइ दिदिबहिनीबाट सहयोग मिल्नेछ । व्यापार व्यवसायमा प्रशस्त नाफा कमाउन सकिने छ । मन शान्त रहनेछ ।
कुम्भ राशी हुनेहरुको आजको दिन सुखद् रहने छैन । बोल्दा विचार पुर्याउनु होला । तपाई बोलेका कुुराहरुबाट आफन्तलाई नराम्रो पर्न सक्दछ । कृषिजन्य उत्पादनमा समस्या देखिन सक्नेछ । आँखामा समस्या देखिनेछ ।
मीन राशी हुनेहरुको लागि आजको दिन राम्रो रहेको छ । मान प्रतिष्ठा बढ्ने छ । स्वास्थ राम्रो हुने छ । व्यवासायबाट राम्रो लाभ हुनेछ । बुद्धि पुर्याएर कार्य गर्दा आँटेको काम पुरा हुने छ ।